Frequently asked questions about Alert Level 3 (isiXhosa) | Covid-19 Response
Frequently asked questions about Alert Level 3 (isiXhosa)
About Alert Level 3 (isiXhosa)
About Alert Level 3 (Afrikaans)
Yintoni iNqanaba 3 leSilumkiso?
INqanaba 3 leSilumkiso sisigaba semiqathango emiselweyo kuzwelonke ngexesha leMeko yeNtlekele efunisa ukuba bonke abemi boMzantsi Afrika ukuba bahlale kwiindawo abahlala kuzo ukuthintela ukunwena kweCovid-19 ngaphandle kokuba wenza umsebenzi okanye umsebenzi wentlalontle ovunyelweyo yimigaqo.
Ukuba uyayishiya indawo ohlala kuyo kufuneka uyinxibe rhoqo imaski yelaphu okanye into ozenzele yona egquma impumlo nomlomo, okanye enye into efanelekileyo yokugquma impumlo kunye nomlomo.
Ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso, kukho ixesha elimiselwa ukuba kuhlalwe ngendlu ukusuka ngo-22H00 de kube ngo-04H00 yonk’ imihla, kwaye kufuneka uhlale ekhaya ngaphandle kokuba unemvume yokuqabelisa iinkonzo ezibalulekileyo okanye uyokusabela kungxamiseko lokhuseleko okanye lwezonyango.
Jonga iinkcukacha apha ngezantsi ezimalunga nezinto ezingabandakanywayo ezikuvumela ukuba uyishiye indawo ohlala kuyo ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso.
Liya kuhlala ixesha elingakanani iNqanaba 3 leSilumkiso?
INqanaba 3 leSilumkiso liqale ngomhla woku-1 kuJuni 2020 kwaye liza kuhlala de lirhoxiswe kwaye/okanye litshintshwe ngelinye iqanaba lesilumkiso elahlukileyo ngokuthi kwenziwe ezinye izilungiso kwimigaqo ekhutshwe nguMphathiswa woLawulo lweNtsebenziswano neMicimbi yezeMveli, phantsi kwale Meko ikhoyo yeNtlekele.
Ukumiswa ngxi kwezinto ngokupheleleyo (INqanaba 5 leSilumkiso) kwaqala ezinzulwini zobusuku bangoLwesine ngomhla wama-26 kuMatshi, kwaze kwaphela ezinzulwini zobusuku bangoLwesine ngomhla wama-30 kuApreli. Emva koko kwaqala imiqathango yeNqanaba 4 leSilumkiso ukusukela ngomhla woku-1 – 30 kuMeyi 2020.
Liza kuphela nini iNqanaba 3 leSilumkiso?
Okwangoku, asazi. URhulumente kaZwelonke uza kuqhubeka nokubeka esweni imeko kunye nenqanaba losulelo lwe-Covid-19 ukumisela eyona ndlela efanelekileyo yokuyeka ukusasazeka kwe-Covid-19. Kuza kwaziswa ngeengcombolo ezithe vetshe njengoko imeko iya ikhula.
Ndingayishiya nini indawo endihlala kuyo ngelixa ndiphantsi kweNqanaba 3 leSilumkiso?
Ungayishiya indawo ohlala kuyo ngeNgexesha leNqanaba 3 ukuba uyakwenza oku kulandelayo:
Wenza nayiphi na inkonzo evumelekileyo;
Uya kwaye ubuya emsebenzini;
Uyokuzithengela izinto okanye uyokufumana iinkonzo, ngaphandle kwezo zinto okanye iinkonzo ezingabandakanywanga;
Ufudusa abantwana ngemvume;
Uyazilolonga phakathi kweyure yentsimbi yesi-06H00 ukuya kwesi-18H00. Oku akunakwenziwa ngokwamaqela alungelelanisiweyo anabantu abangaphaya kwebane kwaye kufuneka bathobele imilinganiselo yokuchaselana kwabantu;
Uya kwindawo yonqulo ekwakulo masipala mnye nalo ukuye okanye komnye ongaphandle kwalo ukuye okanye kwesinye isithili esikwalapha kweli phondo ukulo (enabantu abangadluliyo kubantu abangama-50, ngokuxhomekeke kubukhulu bendawo yonqulo);
Uya esikolweni okanye kwiziko lokufunda, nje ukuba zivulwe ezindawo; kwaye
Uhambela nje ukuphumla/ukuzonwabisa njengoko kuyakube kuvunyelwe.
Kufuneka unxibe imaski yelaphu okanye into ozenzele yona egquma impumlo nomlomo xa ukwindawo enabantu, okanye nayiphi na enye into efanelekileyo yokugquma impumlo nomlomo. Kwakhona, awuvumelekanga ukuba kwindawo enabantu, usebenzisa naluphi na uhlobo lwesithuthi sikawonkewonke, okanye ungene kwisakhiwo, kwindawo okanye kumhlaba womntu ukuba awuyinxibanga imaski yelaphu okanye enye into efanelekileyo yokugquma impumlo nomlomo.
Ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso AWUZUKWAZI ukwenza oku kulandelayo:
Ukuwushiya uMzantsi Afrika; okanye
Ukuhambahamba phakathi kwamaphondo, ngaphandle kwaxa:
o Ukuhambela ukwenza umsebenzi wakho okanye wenza inkonzo evumelekileyo kwaye unemvume ekhutshwe ngumqeshi wakho; o Ukufudukela kwindawo entsha yokuhlala okanye ukuyokunakekela ilungu losapho lakho, ngaphandle kokuba unayo iafidavithi njengoko ifunwa ngokomgaqo;
o Ukwenza uxanduva lokongamela njengelungu lePalamente;
o Ukuya esikolweni okanye kwiziko lemfundo ephakamileyo njengomfundi okanye umfundi ngamathuba xa ezo zikolo okanye amaziko evunyelwe ukusebenza kwaye ngokuxhomekeka ekubeni unesatifikethi kwifom emiselweyo, ekhutshwe yintloko yesikolo okanye yeziko. ; Ukuzimasa umngcwabo njengoko kuchaziwe ngezantsi;
o Ukuhambisa izidumbu zabantu;
o Ukufumana unyango;
o ubuyela kwindawo ubuhlala kuyo ukusuka kwindawo ekugcinwa kuyo umntu yedwa; okanye
o Ukuhambahamba phakathi kwamaphondo njengoko kuvunyelwe nguMphathiswa weMicimbi yezeKhaya okanye umntu otyunjwe nguye phantsi komgaqo wama-41 (umzekelo, kunyango olungxamisekileyo ngemeko ebeka emngciphekweni ubomi, ukubuyiselwa kwilizwe langaphandle ungumhlali wesizwe okanye isigxina kwindawo ahlala kuyo, ufunda okanye makazi njl.
Kuza kwenzeka ntoni ukuba andiyithobeli imigaqo yeNqanaba 3 leSilumkiso?
Nabani na obiza indibano engavumelekanga okanye othintelayo, ophazamisa okanye othintela igosa lonyanzelisomthetho xa lisenza umsebenzi walo, wophula umthetho kwaye angagwetywa ngesohlwayo okanye ngokuvalelwa entilongweni kangangexesha elingadluliyo kwiinyanga ezintandathu okanye zombini isohlwayo kunye nokuvalelwa.
Nabani na osilelayo ukuthobela okanye otyeshela umqathango:
womqathango 35(3), othintela imilaliso;
umgaqo 36(1), ojongana nokugxothwa;
umgaqo 38(1), othintela iinkqubo zokwaluka;
umgaqo 39(1) no-(2), olawula iindawo nemihlaba evaliweyo kuluntu;
umgaqo 44(2), (4), (5) no-(6), olawula ukuthengiswa nokuselwa kotywala; okanye
umgaqo 45, owalela ukuthengiswa kwecuba, iimveliso zecuba, i-e-sigarethi kunye neemveliso ezinxulumene noko, wophula umthetho kwaye angagwetywa ngesohlwayo okanye ngokuvalelwa entilongweni kangangexesha elingadluliyo kwiinyanga ezintandathu okanye zombini isohlwayo kunye nokuvalelwa.
Ngubani oza kuba nakho ukusebenza?
Phantsi kweNqanaba 3 leSilumkiso, uninzi lwamashishini luvumelekile ukuba lusebenze, ngaphandle kwalawo angavumelekanga ukuba mawasebenze. Nangona kunjalo, ukuba unakho ukusebenzela ekhaya, nceda uqhubeke wenze njalo. Ukuhlala ekhaya kuqinisekisa ukuba abo bangenakho ukusebenzela ekhaya bangabuyela emsebenzini ngokukhuselekileyo njengoko linciphile inani labantu abahamba ngezithuthi zikawonkewonke kwaye bambalwa nabantu emsebenzini kwaye kuyagcineka ukuchaselana kwabantu.
Ingaba ndingaqhubeka ngokusebenzisa isithuhti sikawonkewonke ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso?
Ewe, ungassisebenzisa isithuthi zikawonkewonke ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso, kodwa nceda ukwenze oko ukuba ngokwenene kuyimfuneko.
Xa uhamba ngesithuthi sikawonkewonke KUFUNEKA unxibe imaski, okanye enye into egquma impumlo nomlomo ngawo onke amaxesha. Bonke abaqhubi kufuneka baqinisekise ukuba izithuthi zikawonkewonke zisanithayiziwe phambi kokulayisha nasemva kokwehlisa abakhweli.
Kwakhona, kufuneka baqinisekise ukuba zonke iingcango, izibambifestile, iziphumlisingalo kunye neentsimbi zokubambelela zisanithayiziwe kwilowudi nganye kwaye kufuneka bakhuthaze abakhweli ukuba basanithayize besakungena ngaphakathi kwisithuthi nasemva kokuhla kwabo kwisithuthi. Kufuneka abanikazi bezibonelelo zezithutho zikawonkewonke bamisele imiqathango yokuthobela ukuchaselana kwabantu ukuze banciphise ukunwena kwentsholongwane.
IiNkonzo zeteksi ekuthi zii-e-hailing, iimitha teksi, iishathili kunye nezithuthi eziqhutywa ziitshowufa azinakuthwala abantu abangaphezulu kweepesenti ezingama-50% zomthwalo wazo. Izithuthi eziziteksi ezincinci neziphakathi azinakuthwala abakhweli abangaphaya kweepesenti ezingama-70% kumthamo wazo ovumelekileyo ukuba ziwuthwale. Iibhasi azinakuthwala ngaphaya kweepesenti ezingama-50% zomthwalo wazo ovumelekileyo ukuba ziwuthwale. Izithuthi ezithutha abafundi azinakho ukuthwala abakhweli abangaphaya kweepesenti ezingama-70% kumthamo wazo ovumelekileyo ukuba ziwuthwale. Ukuba ubonelela ngenkonzo eyimfuneko kwaye awukwazi ukuhamba uye emsebenzini wakho, umqeshi wakho unokwenzela amalungiselelo afanelekileyo esithuthi ukuze uyokufika emsebenzini.
Ukuba kukho nabaphi na abaqeshi beenkonzo ezibalulekileyo bafumana iingxaki malunga nezithuthi ekubeni zithuthe abasebenzi babo zibase emsebenzini, banokuqhagamshelana neNtloko yeSebe lezoThutho neMisebenzi yoLuntu ku-HOD.TransportPublicWorks@westerncape.gov.za, baze bachaza uhlobo lomngeni wezothutho abajongene nawo. Nceda unike iinkcukacha ezingqalileyo, kuquka nenani labantu abadinga ukuthuthwa, ukubasusa kwindawo ethile ukubasa kwindawo ethile, ngaliphi ixesha.
Ukuba ufumana naziphi na iimpawu ezinjengezomkhuhlane onxulumene neCovid-19, njengefiva okanye ukukhohlela, kungcono ke ukuba uhlale ekhaya. Oku awukweneli nje wena kuphela, kodwa wenzela nokuphepha ukosulela abanye abakhweli.
Yintoni ekufuneka ndiyenzile ukuze ndizimase umngcwabo?
Uza kuba nakho ukuzimasa umngcwabo, kodwa akunakubakho bantu bangaphezulu kwama-50 emngcwabeni, akwenziwa milaliso, kwaye kufuneka kulandelwe yonke imigaqo yokhuseleko kunye nezempilo ukunqanda ukunwena kweCovid-19.
Uza kuvunyelwa kuphela ukuba uhambahambe ngaphakathi kwiphondo, kwingingqi yesixeko okanye kwisithili ukuzimasa umngcwabo ukuba:
ungumyeni/mfazi okanye iqabane lomfi;
ungumntwana okanye umzukulwane womfi, nokuba ungumntwana wokuzalwa, owamkelweyo okanye oze nomyeni/nomfazi;
ungumntwana wasemzini womfi;
umzali womfi nokuba ungumzali wokuzala, owamkelweyo;
isizalwane ngokokuzalwa okanye owamkelweyo okanye udade womfi; okanye
umakhulu/utat' omkhulu womfi.
Umntu ngamnye, nokuba uhamba yedwa okanye hayi, ofuna ukuzimasa umngcwabo nokufuneka ahambehambe phakathi kwezithili, okanye phakathi kwamaphondo ukuzimasa umngcwabo kufuneka afumane ipemithi, ekumele ibe kwifomu evumelekileyo emthethweni. Ungayifumana le fomu kwiofisi kamantyi ekufuphi nawe okanye kwisikhululo samapolisa. Oku kuza kuvumela ukuba uhambe uye kwaye uphinde ubuye emngcwabeni.
Xa ucela ipemithi, kufuneka uveze isatifiketi sokusweleka okanye ikopi eqinisekisiweyo yesatifikethi sokusweleka kuMantyi oyintloko yeofisi okanye umphathi wesikhululo samapolisa okanye umntu okhethwe nguye. Ukuba isatifikethi sokusweleka asikafumaneki kwaye kufune uqhutywe umngcwabo kwisithuba seeyure ezingama-24 ngokuhambelana nemisebenzi yenkcubeko nenkolo, umntu lowo ucela ipemithi kufuneka enze iafidavithi, kwifomu emiselweyo, ikhatswe yileta evela kwinkokheli yenkcubeko okanye yenkolo engqina isidingo sokuqhutywa komngcwabo kwiiyure ezingama-24.
Ngamalungu amabini kuphela osapho lomfi anokuthi, ngeepemithi ezifunekayo, abekhona kwisithuthi esihambisa umzimba womfi siwusa kwisixeko okanye kwisithili esithile, okanye kwiphondo ekuza kuqhutyelwa kulo umngcwabo, ngaphandle kokuba unobangela wokubhubha kwalowo uswelekileyo unxulumene noweCovid-19.
Ndingathuthela kwenye indawo yokuhlala ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso?
Ewe, ungathuthela kwindawo entsha yokuhlala, nkqu nokuba le ndawo intsha yokuhlala ikwiphondo elahlukileyo, kumasipal' ombaxa, kwisithili okanye kwindawo egutyengelwe yile ntsholongwane, ngaphandle kokuba uyifumene ipemithi, ekufuneka ibe kwifomu emiselweyo.
Ingaba ndingagxothwa kwikhaya lam ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso?
Hayi, awunakugxothwa kumhlaba okanye kwikhaya lakho phantsi kweNqanaba 3 leSilumkiso, ngaphandle kokuba inkundla ikhupha umyalelo wokuba ugxothwe.
NgokweMigaqo, inkundla enobuchule inokukhupha ngomyalelo wokugxothwa komntu kumhlaba okanye kwikhaya lakhe ngokwemimiselo yomthetho iExtension of Security of Tenure Act, 1997 (uMthetho ongunombolo 62 ka-1997) kunye noThintelo lokuGxothwa ngokuNgekho mthethweni olukumthetho i-Unlawful Occupation of Land Act, 1998 (uMthetho ongunombolo 19 ka-1998), ngaphandle kokuba ukukhutshwa komyalelo wokugxothwa uyarhoxiswa kude kube lusuku lokugqibela leNqanaba 3 leSilumkiso, ngaphandle inkundla igqiba ekubeni ayibobulungisa ukurhoxiswa koku kude kube lusuku lokugqibela leNqanaba 3 leSilumkiso.
Ingaba ndingaya kwiziko likarhulumente ukuyokutyelela umntu ngeli xesha leNqanaba 3 leSilumkiso?
Ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso luza kupheliswa lonke utyelelo kumaziko ezempilo ngaphandle kokuza kufumana unyango okanye amayeza ngokuhambelana nemigaqo yezempilo. Izigulana ezidinga unakekelo olungxamisekileyo lokukhusela ubomi, iinkonzo zocwangciso nzala kunye nonakekelo lokubeleka zingaya kumaziko wazo ezempilo kunye nabo sele benamadinga aqinisekisiweyo. Ukogeza, akukho bantu bavumelekileyo ukuba batyelele la maziko alandelayo:
AmaZiko okuValela izaphulimthetho
IZisele zokuValela zamaPolisa
AmaZiko okuValela oMkhosi
AmaZiko okuGcina aBantu Abadala.
Njengabazali abaqhawule umtshato ababelana ngokugcina um(aba)ntwana babo, ingaba siza kuvunyelwa ukuhambisa abantwana bethu ukusuka endlwini yomnye ukuya endlwini yomnye?
Imigaqo yeNqanaba 3 leSilumkiso ivumela kuphela ukuhanjiswa kwabantwana phakathi kwamakhaya akummandla wesixeko esimbaxa esinye okanye kumasipala wesithili esinye kwimeko apho abo babambisene ngoxanduva lobuzali ekunakekeleni abantwana, namalungelo apho abo babambisene ngoxanduva lobuzali ekunakekeleni abantwana benako oku kulandelayo:
nalapho abo babambisene ngoxanduva lobuzali ekunakekeleni abantwana nezivumelwano zamalungelo okanye isicwangciso sobuzali, benawo obhaliswe ligqwetha labo; okanye
xa kungekho myalelo wenkundla okanye sicwangciso sobuzali, ipemithi ekhutshwe ngumantyi ehambelana neFomu 3 yeSihlomelo A semigaqo yeCOGTA.
Kuvumelekile ukuhanjiswa kwabantwana phakathi kwababambisene ngoxanduva lobuzali kunye namalungelo omnakekeli, njengoko kuchaziwe kwicandelo 1(1) lomthetho iChildren's Act, 2005 (uMthetho ongunombolo 38 ka-2005), phakathi kwezixeko ezimbaxa, koomasipala besithili okanye kwamaphondo, ukuba ababambisene ngoxanduva lobuzali kunye namalungelo omnakekeli banayo ipemithi ekhutshwe ngumantyi ehambelana neFomu 3 yeSihlomelo A semigaqo yeCOGTA. Umzi lowo umntwana kufuneka esiwe kuwo, kufuneka ungabinamntu oneCovid-19.
Phambi kokuba umantyi akhuphe le pemithi kubhekiswa kuyo apha ngasentla: kufuneka
isatifiketi sokuzalwa okanye ikopi yaso yomntwana okanye abantwana ukuqinisekisa ulwalamano olusemthethweni phakathi kwababambisene ngoxanduva lobazali kunye namalungelo: kunye
nezizathu ezibhaliweyo zokuba kutheni kuyimfuneko ukuhanjiswa kwabantwana.
Phambi kokuba umantyi akhuphe le pemithi kubhekiswa kuyo apha ngasentla:
kufuneka umyalelo wenkundla
ababambisene ngoxanduva lobuzali kunye nesivumelwano samalungelo okanye isicwangciso sobuzali esibhaliswe ligqwetha losapho okanye
isatifiketi sokuzalwa okanye ikopi yaso okanye yomntwana okanye abantwana ukuqinisekisa ulwalamano olusemthethweni phakathi kwababambisene ngoxanduva lobazali kunye namalungelo: kunye
Ndingalishiya ikhaya lam ndihambahambise inje yam, okanye ndenze imithambo, efana nokuncunca okanye ukuqhuba ibhayisekile?
Ewe, ungalishiya ikhaya lakho uhambahambe, ubaleke okanye uqhube ibhayisekile ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso, kodwa ungakwenza oku kuphela ukusuka ngentsimbi yesi-06H00 ukuya kweyesi-18H00.
Ingaba ndingasithenga isigarethi ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso?
Hayi, awukwazi ukuthenga isigarethi, kuquka zonke iimveliso zecuba, ii-e-sigarethi kunye neemveliso ezinxulumene nazo, ngexesha leNqanaba 3 leSilumkiso.
Ingaba ndingayidlala imidlalo esesikweni ngeli xesha leNqanaba 3 leSilumkiso?
yimidlalo ekungabanjwanayo kuyo kuphela enokudlalwa ngeli xesha leNqanaba 3 leSilumkiso. Loo mdlalo ungaquka kuphela amadlali, amagosa omdlalo, iintatheli, amagosa ezonyango kunye nakamabnakude, kwaye kulandelwe yonke imigaqo yezempilo nokhuseleko.
Ingaba ingenziwa imicimbi yolwaluko ngeli xesha leNqanaba 3 leSilumkiso?
Hayi, imicimbi yolwaluko lwamadoda okanye lwamabhinqa okanye izikolo zoku azivumelekanga ngeli xesha leNqanaba 3 leSilumkiso.